Genesisy 1 | MBP Bible | YouVersion
Ny namoronan’Andriamanitra izao tontolo izao.
1TAMIN’ny voalohany Andriamanitra nahary sy ny lanitra sy ny tany.
2Ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana; ary aizina no tambonin’ny lalina. Ary ny Fanahin’Andriamanitra nanomba tambonin’ny rano.
3Ary Andriamanitra nanao hoe: Misia mazava; dia nisy mazava. 4Ary hitan’Andriamanitra fa tsara ny mazava; ary nampisarahin’Andriamanitra ny mazava sy ny maizina. 5Ary Andriamanitra nanao ny mazava hoe ,andro’; ary ny maizina nataony hoe ,alina’. Dia nisy hariva, ary nisy maraina,–andro voalohany izany.
6Ary Andriamanitra nanao hoe: Misia habakabaka eo anelanelan’ny rano; ary aoka hampisaraka ny rano amin’ny rano izy. 7Ary Andriamanitra nanao ny habakabaka ka nampisaraka ny rano ambanin’ny habakabaka tamin’ny rano ambonin’ny habakabaka; dia nisy izany. 8Ary Andriamanitra nanao ny habakabaka hoe ,lanitra’. Dia nisy hariva, ary nisy maraina,– andro faharoa izany.
9Ary Andriamanitra nanao hoe; Aoka hiangona ny rano eny ambanin’ny lanitra ho eo amin’ny fitoerana iray, ary aoka hiseho ny maina; dia nisy izany. 10Ary Andriamanitra nanao ny maina hoe ,tany’; ary ny rano tafangona nataony hoe ,ranomasina.’ Ary hitan’Andriamanitra fa tsara izany.
11Ary Andriamanitra nanao hoe: Aoka ny tany haniry ahitra sy anana mamoa ary hazo fihinam-boa izay mamoa, samy araka ny karazany avy, ka manam-boa ao aminy, eny ambonin’ny tany; dia nisy izany. 12Ary ny tany naniry ahitra sy anana mamoa, samy araka ny karazany avy, ary hazo mamoa izay manam-boa ao aminy, samy araka ny karazany avy. Ary hitan’Andriamanitra fa tsara izany.
13Dia nisy hariva, ary nisy maraina,– andro fahatelo izany.
14Ary Andriamanitra nanao hoe: Misia fanazavana eny amin’ny habakabaky ny lanitra hampisaraka ny andro sy ny alina; ary aoka ho famantarana sy ho fotoana ary ho andro sy taona ireo. 15Ary aoka ho fanazavana eny amin’ny habakabaky ny lanitra izy hanazava eny ambonin’ny tany; dia nisy izany. 16Ary Andriamanitra nanao ny fanazavana roa lehibe–dia ny fanazavana lehibe ho mpanapaka ny andro ary ny fanazavana kely ho mpanapaka ny alina–sy ny kintana. 17Ary Andriamanitra nametraka azy eny amin’ny habakabaky ny lanitra hanazava eny ambonin’ny tany, 18sy ho mpanapaka ny andro sy ny alina, ary hampisaraka ny mazava sy ny maizina. Ary hitan’Andriamanitra fa tsara izany. 19Dia nisy hariva, ary nisy maraina,–andro fahefatra izany.
20Ary Andriamanitra nanao hoe: Aoka ny rano ho be zava-manan-aina; ary aoka hisy vorona hanidina ambonin’ny tany eny amin’ny habakabaky ny lanitra. 21Ary Andriamanitra nahary ny biby vaventy anaty rano sy ny zava-manan-aina mihetsiketsika rehetra, izay efa betsaka ao amin’ny rano, samy araka ny karazany avy, ary ny voro-manidina rehetra samy araka ny karazany avy. Ary hitan’Andriamanitra fa tsara izany. 22Ary Andriamanitra nitso-drano azy hoe: Maroa anaka sy mihabetsaha ary mamenoa ny rano ao amin’ny ranomasina; ary aoka ny vorona hihamaro eny ambonin’ny tany. 23Dia nisy hariva, ary nisy maraina,–andro fahadimy izany.
24Ary Andriamanitra nanao hoe: Aoka ny tany hamoaka zava-mananaina, samy araka ny karazany avy, dia biby fiompy sy biby mandady na mikisaka ary bibi-dia, samy araka ny karazany avy; dia nisy izany. 25Ary Andriamanitra nanao ny bibi-dia, samy araka ny karazany avy, sy ny biby fiompy, samy araka ny karazany avy, ary ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin’ny tany, samy araka ny karazany avy. Ary hitan’Andriamanitra fa tsara izany.
26Ary Andriamanitra nanao hoe: Andeha Isika hamorona olona tahaka ny endritsika, araka ny tarehintsika; ary aoka izy hanjaka amin’ny hazandrano ao amin’ny ranomasina sy ny voro-manidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin’ny tany. 27Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny; tahaka ny endrik’Andriamanitra no namoronany azy; lahy sy vavy no namoronany azy.
28Ary Andriamanitra nitso-drano azy hoe: Maroa fara sy mihabetsaha ary mamenoa ny tany, ka mampanompoa azy; ary manjakà amin’ny hazandrano ao amin’ny ranomasina sy ny voro-manidina ary ny biby rehetra izay mihetsiketsika ambonin’ny tany.
29Ary Andriamanitra nanao hoe: Indro, efa nomeko anareo ny anana manintsam-boa rehetra izay ambonin’ny tany rehetra ary ny hazo rehetra izay misy voa sady manintsam-boa; dia ho fihinana ho anareo ireny. 30Ary ny amin’ny bibi-dia rehetra sy ny voro-manidina rehetra ary ny zava-manan-aina rehetra izay mandady na mikisaka amin’ny tany, dia efa nomeko azy ny zava-maitso rehetra ho fihinany; dia nisy izany.
31Ary hitan’Andriamanitra izay rehetra nataony, ary, indro, tsara indrindra izany. Dia nisy hariva, ary nisy maraina,–andro fahenina izany.
Baiboly Protestanta Malagasy © Malagasy Bible Society, 1965, 2019.
Learn More About Baiboly Protestanta Malagasy
Explore Genesisy 1 by Verse